Mashiinka Qodida Radial | Soosaarayaasha Radial Arm Drill Press Shiinaha
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga1 / Mashiinka Qodida Radial, Radial Arm Drill Press, Soosaarayaasha Shiinaha
Tsinfa waa soo saare xirfadle ah & soo saare mashiinka qodida radial ee Shiinaha.
Marka qeybta shaqada ee laga shaqeynayo ay culus tahay, ma sahlana in la dhaqaaqo, wayna adag tahay in la helo xarunta, kuma haboona in lagu farsameeyo mashiinka qodida toosan ama qodista keydka yar. Waqtigaan waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo mashiinka qodista shucaaca, shaqa-dhaqaaqu ma dhaqaaqo oo ma dhaqaajiyo dunmiiqa, si xarunta dunmiiqa ay ula jaanqaado bartamaha daloolka mashiinka. Sanduuqa dunmiiqa waxaa lagu rakibay gacanta shucaaca waxaana lagu dhaqaajin karaa tareenka hagaha ee gacan radial ah. Gacanta shucaaca ayaa lagu rogi karaa hareeraha tiirarka, markaa booska dunmiiqa si fudud ayaa loo hagaajin karaa. gacanta radial sidoo kale waa la qaadi karaa oo hoos loo dhigi karaa iyada oo loo marayo sadarka si loo daboolo baahiyaha waxqabadka kala duwan. Ka dib hagaajinta booska dunmiiqa, sanduuqa dunmiiqa, gacanta radial iyo khaanadda toosan ee mashiinka qodida radial waa in lagu xiraa si kalsooni leh qaabkooda isku haynta, si qalabka mashiinku u sameysto nidaam adag si loo hubiyo in qalabka mashiinka uu leeyahay qallafsanaan iyo boos ku filan saxsanaanta ficilka jarista xoogga.
Mashiinka qodista Radial hordhaca shaqada ugu weyn:
Mashiinka qodista Radial Radial waxaa inta badan loo isticmaalaa qodista, caajiso, siyoodba, dahaarka, countersinking, reaming, Qalabka waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in machining, wax soo saarka caaryada iyo warshadaha kale
Marka loo eego isku haynta iyo gudbinta, waxay u qaybsan tahay radial farsamo iyo radial hydraulic
Gacanta radial waxay rogtaa 360 darajo. Gacanta dhagaxu way dhaqaaqi kartaa kor iyo hoos. Madaxa madaxu wuxuu u dhaqaaqi karaa bidix iyo midig isagoo raacaya gacanta shucaaca si uu si fudud ugu meeleeyo
Qaab dhismeed fudud, fududahay in la shaqeeyo.
Muuqaalka mashiinka qodista Radial:
Mashiinka qodista radial:
Sawirro iyo qeexitaan
Ugu badnaan dhexroor qodista:40mm
Ugu badnaan dhexroor qodista:50mm
Ugu badnaan dhexroor qodista:63mm
Mashiinka ugu muhiimsan (kw): 5.5kw
Ugu badnaan dhexroor qodista:80mm
Muuqaalka saxaafadda ee layliga xagjirka ah:
Joogtaynta sare ee dhalidda dunmiiqa
Fuselage cast iron wuxuu leeyahay awood sare
Sida loogu shaqeeyo mashiinka qodida radial
1 Aasaas go'an Moodooyinka ka sarreeya Z3050 waa inay hubiyaan in aasaaska uu adag yahay si looga fogaado halista daadinta.
2 Ku nadiifi saliida ka-hortagga miridhka qalabka oo hubi qadarka saliida ee qaybta saliidda
3 Koronto, riix furaha korantada ugu weyn, awooda dhamaan qeybaha qalabka mashiinka, udiyaar garow howlgalka qalabka mashiinka, dami batoonka, aalada mashiinka dansan. Hubi in dhulka lagu kalsoonaan karo ee qalabka mashiinka.
4 Hubi in taxanaha wajiga korontadu sax yahay iyada oo loo marayo dunmidda dunidda iyo badhanka gadaashiisa. Hadday cakis tahay, beddel laba xarig oo koronto ah
5 Ku hagaaji miiska shaqada saldhigga oo ku hagaaji qaybta shaqada. Ku rakib waxoogaa daloolin ah, ka dibna kor u qaad gacanta xagjirka ah dhererka la doonayo, leexo lugta gacanta, ku hagaaji madaxa meesha aad rabto, qufulka gacanta iyo qalabka madaxa, iyadoo ku xiran nooca qalabka, adoo adeegsanaya qufulka haatrooliga ama farsamada.
6 Ku shaqee badhanka quudinta si aad u shaqeyso.
7 Qalabku wuxuu leeyahay nidaam qaboojiye ah. Qalabku wuxuu furi doonaa bamka qaboojinta wuxuuna hagaajinayaa marinka tuubbada qaboojinta si uu ula jaanqaado qaybta shaqada ee qaboojinta.
8. Markaad dhameyso howsha, xir layliga radial, oo tirtir gacanta radial iyo khaanadda tareenka faashad wanaagsan iyo saliid si joogto ah si looga fogaado waxyeelo.
Haddii aad u baahan tahay dukumiintiyada hawlgalka PDF ama PPT ee ku saabsan mashiinka qodida radial, fadlan la xiriir shaqaalaha iibka
Qiimaha mashiinka qodista Radial
Ku saabsan qiimaha mashiinka qodista radial, sida ku cad moodooyinka kala duwan, qiimaha aad ayuu u kala duwan yahay. Qeexitaanka mashiinka qodida radial ee caadiga ah, qiyaasta qiimaha qiyaasti waa 3000USD ~ 50000USD. Markay weynaato mugga wax iibsiga, ayaa ka jaban qiimaha. Is bedbedelka sarrifka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doonta qiimaha. Haddii aad u baahan tahay qiimo sax ah, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto iibiyaha si loo xaqiijiyo.
Waa maxay mashiinka qodida radial? qaybo, qaabdhismeed, qaybood.
Sawirka dhanka bidix waa jaantuska dulucda ah ee daabacaadda gacanta xagjirka ah, oo inta badan ka kooban lix qaybood:
Waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero oo lagu hagaajiyo qalabka mashiinka. Tiirka toosan ayaa lagu rakibay salka, kaas oo u baahan in lagu hagaajiyo dhulka si loo hubiyo xasilloonida daloolka radial.
2 Gacanta shucaaca
Gacanta shucaaca ee lagu dhejiyay tiirka toosan si ay u taageerto dhaqdhaqaaqa bidix iyo midig ee sanduuqa dunmiiqa. Gacanta xagjirka ah waa lagu wareejin karaa sadarka waana qaybta ugu muhiimsan ee daloolinta gacanta, taas oo ku habboon hawlwadeennada inay ku helaan hadba sida loogu talagalay in loo farsameeyo
Tiirka lagu dhejiyay salka, wuxuu taageeraa dhaqdhaqaaqa gacanta shucaaca. Wareejinta leedhka ayaa wadi kara safka kor iyo hoos
4 Sanduuqa dunmiiqa
Badhamada hawlgalka ugu weyn waxaa lagu rakibay sanduuqa dunmiiqa. Hawlwadeenku wuxuu xakameynayaa wareegga qoditaanka daloolka sanduuqa dunmiiqa.
5 Miiska dhaqaajinta
Dhaqdhaqaaqa shaqada leh T jeexdin si loogu hagaajiyo qalabka shaqada
Badanaa waxaa jira laba matoorro, mid ka koreeya tiirka, oo mas'uul ka ah qaadista gacanta ee shucaaca. Mid ka sarreeya sanduuqa dunmiiqa, oo mas'uul ka ah wareegga dunmiiqa.